Andron’ny tenin-dreny: lanonambe ny tany Maevatanana | NewsMada
Andron’ny tenin-dreny: lanonambe ny tany Maevatanana
Par Taratra sur 25/02/2020
Samy nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tenin-dreny avokoa ireo firenena maro. Samy nanana ny azy koa ny faritra rehetra teto Madagasikara, na dia tany Maevatanana aza no lanonana ofisialy.
“Na baka aiza, na baka aiza, tsika Malagasy ‘ty, resaka raika foagna”. Lohahevitra nentina nanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tenin-dreny, na ny teny ibeazana io. Naka endrika lanonambe ny fankalazana ofisialy, izay natao tany Maevatanana, ny faran’ny herinandro lasa teo. Ny zoma 21 febroary no nanomboka ny hetsika isan-karazany tao an-drenivohitry ny faritra Betsiboka. Nisy ny fifananinana tononkalo, hatsikana, slam, sns, nandraisan’ireo mpianatra anjara tamin’io fotoana io.
Nanasongadinana ny fiteny avy amin’ny faritra rehetra eto Madagasikara ihany koa ny hetsika rehetra notontosaina. Ny asabotsy 22 febroary kosa ny tena ivon’ny fankalazana. Nisy ny diabe naka endrika “carnaval” notontosaina tao an-tampon-tanànan’i Maevatanana tamin’io. Naneho dihy, fomba fitafy sy endri-kolontsaina marolafy ireo mpandray anjara izay avy amin’ny faritra maro, nandritra izany.
Niara-dalana tam’ity fankalazana ity koa ny hetsika “Iray ihany isika”. Tetikasan’ny minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, hanandratana ny maha iray ny Malagasy izy ity. Voizina amin’ny alalan’ny kolontsaina misy isam-paritra, izay manaporofo izay firaisankina sy fihavanan’ny samy Malagasy izay.
Tsiahivina fa fanaon’ny minisiteran’ny Kolontsaina isan-taona ny fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tenin-dreny. . Fotoana izay efa nofaritan’ny Unesco araka ny fanapahan-kevitra tao amin’ny fivoriambe faha-30 tamin’ny taona 1999 ary efa nankalazaina izany teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena nanomboka ny taona 2000 rahateo io. Natao hanasongadinana sy hanomezana lanja manokana ny teny izay maneho ny mampiavaka azy ny tsirairay. Tsy mijanona amin’ny fankalazana fotsiny anefa, fa misy ny asa mitohy amin’ny fampitiavana, fampahafantarana, fikolokoloana ary fanomezan-danja izany teny ibeazana izany.